लुम्बिनी विश्व शान्तिस्थल तथा विश्व शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । अर्बौं बौद्ध अनुयायीको प्रियस्थल हो लुम्बिनी । लुम्बिनीको महत्व बुझेर संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत लुम्बिनीको विकासका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई सन् १९७२ मा लुम्बिनीको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यसहितको गुरुयोजना तयार गर्न जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
प्रोफेसर टांगेले ६ वर्ष लगाएर १९७८ मा लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार पारी तत्कालीन सरकारलाई बुझाएका थिए । गुरुयोजनाअनुसार सन् १९८५ सम्म प्रथम चरण र १९९५ सम्ममा दोस्रो चरण गरी लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न हुनसकेको छैन । ४० वर्षमा पनि एउटा गुरुयोजनाअनुसारको काम सम्पन्न हुन नसक्नु आफैंमा दुःखद् विषय हो ।
पहिले आर्थिक समस्या, सरकारले कनिका छरेझैं प्रदान गर्ने न्यून बजेट, राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन लुम्बिनी गुरुयोजनाले । तर अहिले पछिल्लो केही वर्षमा भने देखिने गरी काम सम्पादन भइरहेको र अबको ३ देखि ४ वर्षमा लुम्बिनीमा गुरुयोजनाअनुसारको बाँकी सबै काम सकिने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्ता (अवधेशकुमार त्रिपाठी) बताउँछन् । विगतमा भन्दा अहिले धेरै काम भएको उपाध्यक्ष मेत्ताको भनाइ छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव तथा कोषका योजना प्रमुख ई. सरोजकुमार भट्टराई करिब ८५ प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी कामका लागि करिब ६ अर्ब लाग्ने बताउँछन् । विगतमा जस्तो अहिले आर्थिक समस्या छैन, भट्टराई भन्छन् ।
करिब ४ दशकदेखि निरन्तर काम भइरहेको (कछुवा गतिमा) लुम्बिनीको प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसारसँगै विकासलाई समेत जोड्दै प्रदेश ५ सरकारले २०७६ साललाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदैछ । २५६३औं बुद्ध जयन्तीका दिन जेठ ४ गते शनिबार (भोलि) लुम्बिनी भ्रमण वर्षको शुभारम्भसमेत हुँदैछ । लुम्बिनीमा गत वर्ष सन् २०१८ मा १ लाख ७० हजार विदेशी पर्यटक आएका थिए भने नेपाली र भारतीयसमेत करिब १५ लाख पर्यटक लुम्बिनी आएका थिए । लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको समयमा २५ लाख पर्यटक लुम्बिनी भिœयाउले लक्ष्य लिएको छ । लुम्बिनीको गुरुयोजना, २५६३ औं बुद्धजयन्ती र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ का विषयमा केन्द्रित रही कारोबार दैनिकका संवाददाता मनोरञ्जन शर्माले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सारः
तीन वर्षमा लुम्बिनी हेर्न लायक हुनेछ
भिक्षु मेत्ता, उपाध्यक्ष लुम्बिनी विकास कोष
विगतमा के कसरी काम भए त्यसतर्फ नजाऊँ । विगत २ वर्षदेखि लुम्बिनी गुरुयोजनाका कामहरू धेरै अघि बढेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिने गरी काम भएका छन् । अब ३ वर्षभित्र लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम फत्ते गर्न बाँकी रहेका पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डरबाट काम अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं । कन्सल्टेन्सीहरूले काम गरिरहेका छन् । अब कन्सल्टेन्सीको प्रतिवेदनका आधारमा कति रुपैयाँ खर्च हुन्छ र कति समयमा बाँकी काम सम्पन्न हुन्छ थाहा हुन्छ । हाम्रो सोचाइ बाँकी काम अब ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हो । तीन वर्षमा लुम्बिनी हेर्न लायक अर्थात् लुम्बिनी जस्तै हुने हाम्रो विश्वास छ । पर्यटन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीकै कारण ग्लोबल टेन्डरमार्फत बाँकी काम गर्न सहज भएको हो । अब ढिला गर्नु हँुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले काम गर्न सहज छ । बजेटको अभाव पनि छैन । बजेट अभाव छैन र बजेट नभएकाले काम गर्न नसकिएको भन्ने पनि छैन । अहिले कामले रफ्तार लिएको छ । सबैतिरबाट साथ छ । हामी सबैको लुम्बिनी हामी सबै मिलेर बनाउने हो भन्ने धारणा राखेर सरोकारवाला निकाय, स्थानीय जनता, राजनीतिक दलअघि आउनुपर्छ ।
गुरुयोजना क्षेत्रमात्र होइन, बाहिर पनि विकास हुनुपर्छ फकरुद्धिन खान, प्रदेशसभा सदस्य, रुपन्देही
लुम्बिनीको हकमा भन्नुपर्दा लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्र पर्खालभित्र र बाहिर आकाश–जमिनको फरक छ । त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ । लुम्बिनीभित्र जुन चमक, स्वच्छता, सरसफाइ, वातावरण, शान्त, त्यो उज्यालो लुम्बिनीबाहिरका बासिन्दाले पनि अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । यो एउटा चुनौती हो । लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि विकास हुनुपर्छ, स्थानीयले खाजेको पनि यही हो । लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रका बाहिर (पर्खालबाहिर) का जनताको परिकल्पना पनि भित्र जस्तै स्वच्छता, शान्त, उज्यालो लुम्बिनी हो । अब यसलाई लुम्बिनीसँगै जोडेर हुन्छ कि छुट्टै योजनाहरू बनाएर कसरी हुन्छ अघि बढाउनुपर्छ । नत्र बत्तीमुनिको अँध्यारो हुनेछ लुम्बिनीको चारैतिर । स्थानीयले परिकल्पना गरेको पनि यही हो । गुरुयोजनासँगै बाहिर पनि विकास हुनुपर्छ । हामी सबैको चाहना यही हो । लुम्बिनी विकास कोषले स्थानीय बासिन्दाको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । राम्रो कामका लागि लुम्बिनीका जनता सदैव साथमा छन् ।
लुम्बिनीको विकासमा सबैले अपनत्व लिनुपर्छ सरोजकुमार भट्टराई
योजना प्रमुख एवं निमित्त सदस्य सचिव
लुुम्बिनी विकास कोष
विगतमा भन्दा अहिले लुम्बिनीमा पूर्वाधारको कामले तीव्रता लिएको छ । अब बाँकी रहेका कामका लागि ग्लोबल टेन्डरबाट गर्ने भन्ने भइसकेको छ । ग्लोबल टेन्डरबाट काम हुँदा अब तोकिएको समयभित्रै सबै काम सम्पन्न हुन्छ । बाँकी सांस्कृतिक र अन्य भवन ६ वटा, ८ स्थानमा बसपार्क, विद्युतीकरण र कम्युनिकेसनका काम, सर्कुलर लेभी पोन्ड तथा मायादेवी मन्दिर वरपर सौन्दर्यकरण गर्ने काम र अन्य केही बाँकी छन् । त्यो सबै सक्न ३ देखि ४ वर्षको समय हो । तीव्र गतिमा काम अघि बढ्यो, कुनै प्राविधिक समस्या आएन भने ३ वर्षमै बाँकी काम सम्पन्न हुन्छन् । अब बाँकी काम गर्न अझै कम्तीमा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कन्सल्टेन्सीहरूले अहिले अध्ययन गरिरहेको र केही महिनामै विस्तृत विवरण पनि आइपुग्नेछ, त्यसबाट के–के काम बाँकी छ, गुरुयोजनाअनुसार कति रकम खर्च हुन्छ र कति समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने थाहा लाग्छ । उति बेला बनेको गुरुयोजनाअनुसारको निर्माण हुने संरचनाहरू अहिले अनावश्यक देखिए नराख्ने र आवश्यक भएका नयाँ संरचना निर्माणका लागि पनि उनीहरूले सुझाव दिन्छन् । अब सबै मिलेर लुम्बिनीको गुरुयोजनाअनुसारको बाँकी काम सम्पन्न गरी विश्वकै उत्कृष्ट धार्मिक गन्तव्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
लुम्बिनीको विकासका लागि सबैले अपनत्व लिनुपर्छ । चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ (सीपी)
अध्यक्ष, सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन (सान)
लुम्बिनी हामी सबैको धरोहर एवं गहना हो । विश्व शान्तिका लागि पुजनीय स्थलका रूपमा रहेको लुम्बिनीलाई राज्यले समयमा चिन्न नसक्दा आज हामी पछि परेका छांै । विभिन्न कारणले गर्दा लुम्बिनी गुरुयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । अब बाँकी काम के कसरी हुन्छ छिटो हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासका कामले गति लिनुपर्छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि अब अन्तिम–अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले लुम्बिनीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो स्थानबाट काम गरिरहेको छ । पर्यटकलाई लक्षित गरी होटलहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । अर्बौं लगानी भएको छ । लुम्बिनीको गुरुयोजनाका बाँकी कामसँगै देश–विदेशमा प्रवद्र्धन र प्रचार गर्ने काममा कन्जुस्याइँ गरिनु हँुदैन । जसरी अहिले प्रदेश सरकारले २०७६ साललाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । यसले पक्कै पनि लुम्बिनीको देश–विदेशमा प्रचार हुन्छ । यस्ता सकारात्मक कामको हामी निजी क्षेत्रले जहिले पनि स्वागत गर्छौं । लुम्बिनीको विकास, प्रवद्र्धन एवं प्रचारप्रसारका लागि हामी पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी जहिले पनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल टुरिजम बोर्डलगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी अघि बढ्न तयार छौं ।
लुम्बिनीको प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनीमै बीआईटीएम
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नाट्टा नेपाल
लुम्बिनी र नेपालको पर्यटन एक–अर्काका पूरक हुन् । नेपालको पर्यटनस्थल भन्ने बित्तिकै लुम्बिनी जोडिन्छ । लुम्बिनीको विकास, प्रचारप्रसार, प्रवद्र्धन एकसाथ अघि बढाइनुपर्छ । लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनको काम अघि बढाउँछौ भन्नु हुँदैन । सबै काम अहिलेदेखि एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । लुम्बिनीको विकास र प्रचारका लागि प्रदेश सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो निकै राम्रो कार्यक्रम हो । यसले लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्न मद्दत गर्छ । अब लुम्बिनीसहित बुद्ध जीवनीमा आधारित स्थलहरूको प्रचारप्रसारमा बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ । वेबसाइटहरूमा अपडेट गरिरहनुपर्छ । साथै देशविदेशका टुरअपरेटर, गाइड, मिडियाकर्मीहरूलाई ती स्थानका बारेमा जानकारी दिनका लागि फेम ट्रिप अतिआवश्यक छ । फेम ट्रिपले प्रचारप्रसारमा बढी जोड दिन्छ । अर्को कुरा, ती स्थलहरूका बारेमा दक्ष टुर गाइड बनाउनुपर्छ । मुख्य कुरा भनेको हामीले गत वर्ष सरकार र टुरिजम बोर्डसँग मिलेर गरेको बुद्धिष्ट इन्टरनेसनल टुरिजम मार्ट (बीआईटीएम) काठमाडौं, पोखरा, चितवन, भैरहवामा होइन, लुम्बिनीमै प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्छ । बीआईटीमएम लुम्बिनीको पर्यटन विकासका लागि कालान्तरमा महŒवपूर्ण हुनेछ ।
लुम्बिनी हिरा खानी हो
नाट्टा प्रदेश ५
लुम्बिनी अप्रशोधित हिरा खानीका रूपमा रहेको स्थान हो । विस्तारै सरकारले लुम्बिनीको महŒव बुझ्दैछ । लुम्बिनीबाटै देशको समृद्धिको ढोका खुल्छ । अब लुम्बिनीको विकासमा ढिलाइ गर्नु हँुदैन । निजी क्षेत्रले सधैं सहयोग र सहकार्य गर्छ । लुम्बिनी विकास कोषमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनु जरुरी छ । राजनीतिकै कारण लुम्बिनीको विकासमा ढिलाइ भएको हो । यसमा सबैको दोष छ । लुम्बिनीको गुरुयोजनासँगै स्थानीयको आयआर्जन वृद्धिका कार्यक्रमतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । लुम्बिनीनजिकै भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण भएकाले धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भविष्यमा लुम्बिनीमा आउने निश्चित छ । त्यसैले लुम्बिनीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अब ढिलाइ गर्नु हँुदैन । अर्को कुरा, लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । अहिलेको प्रदेश सरकारको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०७६ कार्यक्रम लुम्बिनीको समग्र विकास र प्रवद्र्धनका लागि राम्रो संकेत हो । सबै मिलेर भ्रमण वर्षको कार्यक्रम सफल बनाउनुपर्छ ।
लुम्बिनी सबैको प्रियस्थल लिला गिरि
मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, प्रदेश नम्बर ५
लुम्बिनी बौद्धमार्गी मात्र नभई शान्तिप्रति विश्वास गर्ने सबैका लागि अति प्रियस्थलको रुपमा रहेको छ । विश्वभरका शान्तिप्रियहरूको संगमस्थल लुम्बिनी हो । लामो समय भयो लुम्बिनी गुरुयोजना सुरु भएको । अब छिट्टै गुरुयोजना सम्पन्न गर्न लाग्नु पर्छ । लुम्बिनीको विकासका लागि प्रदेश ५ सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ । संघीय सरकारसँग लुम्बिनीको विकासका लागि मिलेर काम गर्छौं । स्वदेशी मात्र होइन विदेशीको समेत महत्वपूर्ण गन्तब्यस्थल लुम्बिनी बन्दै गएको छ अहिले । लुम्बिनीको पूर्वाधार विकाससँगै प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेर प्रदेश सरकारले वर्ष २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ एउटा सुरुवात हो । यो कार्यक्रमले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि सघाउने छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्षमा खाली कार्यक्रम मात्रै नगरी बाँकी रहेका काम समयमै सम्पन्न गर्ने, लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउने लगायतका नीतिगत विषयमा समेत छलफल बहस हुनेछन् । लुम्बिनी भ्रमण वर्षमा बाह्य र आन्तरिक गरी २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।
लुम्बिनीले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
उदय राना मगर
यूनेस्कोले बुद्ध जन्मस्थानलाई विश्व सम्पदास्थलको रूपमा आफ्नो सूचीमा राखेको छ । यो स्थानमा हिन्दू र बौद्ध धार्मिक समुदायको साथ साथै सम्पूर्ण संसारको इतिहास र संस्कृतिका कारणले समेत महत्व छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रलाई विश्वसामु परिचित गराउनका लागि प्रचार प्रसारमा ध्यान दिनुपर्छ । यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न थप लगानी बढाउनु पर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट राष्ट्रिय आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सकिने भएकाले यसको बृहत्तर विकास गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै यस क्षेत्रको प्रचार र प्रसार गरी धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । मोनोरेलको माध्यमद्वारा बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, देवदह तथा रामग्रामलाई कनेक्टिभिटी गरिनु आवश्यक छ । कनेक्टिभिटीको माध्यमद्वारा यस क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरूदण्डकै रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । छिमेकी देश चीनमा रहेको बौद्धिष्ट जनसंख्याको सानो हिस्सामात्र लुम्बिनी क्षेत्रमा तान्न सकेको खण्डमा रूपन्देहीको मात्र नभई सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तसर्थ, पनि यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
छिमेकी देशहरू चीन तथा भारतलाई केन्द्रित गरी व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिनु पर्छ । त्यसका लागि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ घोषणा गरी अगाडि बढेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रको विकासमा यसले केही सहयोग गर्ने देखिन्छ । तर पनि यस क्षेत्रलाई विश्व बजारमा बिक्री गर्न नसकिरहेको परिवेशमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।
सदभावनादूत लुम्बिनी विकास कोष
विश्वमा लुम्बिनीको नाम, मान, सम्मान फैलने क्रममा छ । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकहरू विस्तारै बढिरहेका छन् । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि विभिन्न प्याकेज हामीले दिन सक्नुपर्छ । उनीहरूको बसाइ अवधि बढाउने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ । यसका बारेमा लुम्बिनी विकास कोष, सरकार एवं सरोकारवालाले योजना बनाउन जरुरी छ । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनका लागि प्रस्तावित मायादेवी सुत्केरी मार्गको घोषणा गरी त्यसमा पदयात्रा गराउने, प्रत्येक महिना पूर्णिमाको दिन ‘फुल मुन डे प्रेयर’ गर्ने, त्रिपिटक च्यान्टिंग, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन साथै आध्यात्मिकता झल्कने खालका खेलकुद कार्यक्रम जस्तै लुम्बिनी पिस म्याराथन, साइक्लिंगमात्र नभई बर्ड वाच फेस्टिबल, टुर डे लुम्बिनी, स्थानीय गाउँहरूको भ्रमणजस्ता कार्यक्रम लगातार गरियो भने पर्यटकलाई भुलाउन सकिन्छ । जसले पर्यटकको बसाइ अवधि बढ्छ ।